Sky Sports , L'Equipe & De Telegraaf Oo Isku Khilaafay Haddii Uu De Ligt Go'aan Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa. - Gool24.Net
Sky Sports , L’Equipe & De Telegraaf Oo Isku Khilaafay Haddii Uu De Ligt Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalkiisa.
Sky Sports ayaa maanta war deg deg ah ku shaaciyay in difaaca kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt uu go’aan ku gaadhay in uu kooxda Juventus ku biiro laakiin waxaa jira warar kale oo khilaafsan oo ay qoreen wargaysyo caan ah oo saamayn ku lahaa wararka De Ligt.
Waxaa hore u soo baxay warka sheegayay in kooxda Juventus ay hogaanka u qabtay tartanka loogu jiro saxiixa De Ligt kadib markii ay kooxaha Barcelona iyo PSG ku fashilmeen in ay heshiiskiisa dhamaystiraan.
Laakiin Sky Sports ayaa hadda ku waramaya in Matthijs de Ligt uu go’aan ku gaadhay in uu ku biiro kooxda Juventus.
Laakiin xogta lagu daabacay wargayska dalka Holland ee uu De Telegraaf oo uu Matthijs de Ligt dhalasho ahaan ka soo jeedo ayaan sheegayn in uu 19 sano jirkani wali go’aan gaadhay balse waxay cadeeyeen in ay Juventus ku horayso tartanka loogu jiro De Ligt.
Haddaba si aan u saxno wararka jira oo dhan waxay shabakada Gool24 halka idiinku soo gudbinaysaa xogta wargaysyada L’Equipe & De Telegraaf ay bixiyeen Matthijs de Ligt taas oo aan la mid ahayn warka uu Sky Sports shaaciyay.
Muddoyinkii la soo dhaafay warar badan oo iskhilaafsan ayaa warbaahinta caalamka ka socday iyada oo haddaba koox loo saadaalinayay in ay ku guulaysanayso saxiixa De Ligt balse arinta ayaa hadda u muuqata in ay cirka isku sii shareertay.
Sky Sports ayaa soo qoray: “Deg deg: “Matthijs de Ligt waxa uu go’aan ku gaadhay in uu xagaagan ku biiro Juventus iyada oo la tixgalinayo Sky Italy”.
Wargayska L’Equipe iyo Xogta Uu De Ligt ka bixiyay: Wargayska L’Equipe waxa uu sheegay in De Ligt uu door bidayo in uu kooxda PSG ku biiro isla markaana uu hadda ka soo jeedsanayo Barcelona iyada oo aan xataa la xusin in Juventus ay ku dhawdahay saxiixa De Ligt.
Wargayska De Telegraaf iyo Xogta Uu De Ligt ka bixiyay: Wargayska dalka Holland ka soo baxa ee De Telegraaf ayaa sheegay in xidiga xulkooda Matthijs De Ligt uu dalab fiican ka helay kooxda Juventus laakiin may sheegin in uu heshiis jiro ama uu xataa De Ligt aqbalay in uu ku biiro kooxda Juventus.
Warbaahinta dalka France laga leeyahay ee Get French Football News ayaa barta twitter ku maagay Sky Sports waxayna ku qabsadeen in warka ay deg dega ku sheegeen ee De Ligt aanu ahayn mid ka soo baxay Talyaaniga maadaama oo ay Get French Football News ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee baahiyay in Juventus ay ku horayso tartanka De Ligt.
Waqtiga ayaa kala saari doona warbaahinta isku khilaaftay haddii ay Juventus heshiis la gaadhay De Ligt iyo haddi kale waxaana la sugayaa in uu soo baxo war rasmi ah oo si buuxda loogu kalsoonaan karo.
Si kastaba ha ahaatee, wariyaha Talyaaniga ah ee Gianluca di Marzio ayaa sheegay in Juventus ay hadda hogaaminayso tartanka loogu jiro saxiixa De Ligt balse isna muu sheegin in uu wax heshiis ahi jiro inkasta oo uu xusay in wada xaajoodku ay maanta oo sabti ah sii socon doonaan.